Qaramada midoobay oo ka digtay xaalado adag oo weli ka taagan Purma | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Qaramada midoobay oo ka digtay xaalado adag oo weli ka taagan Purma
Qaramada midoobay oo ka digtay xaalado adag oo weli ka taagan Purma
Geneva-(SONNA)-Hay’adda qaxootiga Adduunka ee UNHCR ayaa ka digtay Maanta oo Jimca ah in dib loo celiyo Dadka kasoo jeeda qoomiyadda Rohingaha ee ku sugan Dalka Bangaladhesh, iyadoo aan la hubin xaaladda goobaha la dejinayo oo ay weli ka jiraan tacaddiya ka dhan Muslimiinta laga badan yahay.
Jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in marka hore Gobolka Waqooyiga Purma ee Rakhiin laga shaqeeyo ammaankiisa iyo xasiloonidiisa inta aan Muslimiinta reer Rohinga laga soo daabulin Bangaladhesh.
Afhayeen u hadlay jimciyadda qarumaha ka dhaxaysa laanteeda qaxootiga oo lagu magacaabo Adrian Edwards, ayaa sheegay inaanan Dadka dib loo celin karin iyadoo aan la hubin xaaladda Gobolka Rakhiin ee ay Rohiinguhu degaan.
Bilihii Novembar iyo Decembar ee Sanadkan ayaa la sheegay inay gudaha Dalka Bangaladhesh gaareen 646,000 Qof, kuwaas oo ka cararay gabbood-fallada ka jira Dalka Mynamar sida ay sheegtay hay’adda socdaalka Adduunka ee IOM.
Next articleR/Wasaare Khayre”Ciyaaraha waa guul iyo horumar bulshadu ay ku socoto”
Mareykanka oo maxbuus ku wareejiyay ururka Talibaan
Midawga Yurub oo diiddan in Britian ay dib u eegto heshiiska Woqooyiga Ireland
Dablay hubaysan oo 55 qof ku dilay woqooyiga dalka Burkina Faso